Zimkhalele ubaba obulale izingane | isiZulu
Zimkhalele ubaba obulale izingane
Uvalelwe umama owabulala 5 wezingane
Unesi kwelokudlwengulwa kwesiguli
Uvalelwe ozame ukudubula umthengi
Johannesburg - Zimkhalele ubaba wezingane ezinhlanu ozame ukuzingqongqisa zonke ngomlilo kodwa kwashona ezimbili kuphela.
Lo baba wezingane oneminyaka engu-27 ubudala waseVanderbijlpark, kuthiwa uvalele izingane endlini wase okhela umlilo, izingane ziseminyakeni ephakathi kwezinyanga eziyishumi nanye kuya eminyakeni eyisikhombisa ubudala.
Okhulumela amaphoyisa uWarrant Officer Kinnie Steyn uthi izingane ezintathu eziseminyakeni emibili kuya kweyisikhombisa, zikwazile ukuphulukundlela kwashona enezinyanga eziyishumi nanye nenye eneminyaka emibli ubudala.
Izidumbu zezingane ezishonile zitholakale ngemuva kokuthi sekucishwe umlilo.
USteyn uthe ubaba wezingane ubanjwe esemzini oseduze, uthe uzovela ngaphambi kweNkantolo yeMantshi yaseVanderbjlpark maduzane.